UEFA Oo Beddeshay Garsoorihii Ay U Magacowday Dhexdhexaadinta Kulanka Ajax vs Real Madrid | Laacib.net
UEFA Oo Beddeshay Garsoorihii Ay U Magacowday Dhexdhexaadinta Kulanka Ajax vs Real Madrid
Lugta koowaad ee kulanka Ajax iyo Real Madrid ee wareegga 16-ka tartanka Champions League, waxa uu xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA uu hore ugu magacaabay inuu dhexdhexaadiyo garsoore Szymon Marciniak oo u dhashay waddanka Poland, hase yeeshee garsoorahan ayaan kulankaas qaban doonin.
UEFA ayaa go’aan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciyaartan uu dhexdhexaadin doono Damir Skokina, halka uu Marciniak kormeeri doono garsoor caawiyaha VAR.
Damir Skomina oo kulamadii uu dhexdhexaadiyey ay Real Madrid guulo waaweyn kasoo gaadhay, ayaa waxay haysataa lix jeer oo badis ah iyo laba khasaare ah, waxaana kulankii ugu dambeeyey ee uu u qabtay ay 3-1 kaga adkaatay Napoli laba sannadood ka hor, halka ciyaar Ajax ay bishii September la ciyaareena ay Los Blancos ku adkaatay 2-0.
Labada ciyaarood ee guul-darrooyinka ah ee Skomina uu u qabtay Real Madrid waxay kasoo gaadheen kooxaha reer Germany ee Borussia Dormtund oo 2-0 ku jiidhay sannadkii 2014 iyo Schalke oo sannadkii 2015 kaga adkaatay 4-3.
Real Madrid ayaa Arbacada waxay marti u noqonaysaa Ajax oo ay magaalada Amsterdam ugu tegayso ka hor inta aanay bisha dambe lugta labaad ku qaabilin Santiago Bernabeu.